Maalinta Furriinka: Arrimaha looga hortago burburka guurka iyo qoyska - Aayaha
Home ARIMAHA BULSHADA Maalinta Furriinka: Arrimaha looga hortago burburka guurka iyo qoyska
Maxay lamaanayaasha sameyn karaan marka ay dareemaan in rabitaan ahaan ay kala go'een
Qaar ka mid ah lamaanayaasha, waxaa suuragal ah in ay dareemayaan in aysan is rabin ama ay kala go’een dareen ahaan, arrintaas oo culeys wayn ku noqota xiriirkooda ka hor intaan furriinka la garin, sida ay sheegayaan khubarada.
Lamaanayaasha daafaha caalamka waxay iska ilaaliyaan in ay ka wada hadlaan sababta aysan dareen ama rabitaan isugu qaadi karin, inkastoo dhibaatada lamaanaha kala dhexgaleysay ay sii fogaaneyso. Waxaa dhici karta in arrintaas ay ka dhib badan tahay furriinka.
waxyaabaha sababa in lamaanaha iyagoo is qaba ay “haddana dareen ahaan u kala fogaadaan”, ayaa waxaa heshay BBC-da waxayna dhakhaatiirta waydiisay xalka.
“Dhab ahaantii, kuuma sheegi karo in weli aan xaaskeyga is qabno ama inaan kala tagnay,” ayuu yiri Kamal*. Waa nin oo deggan London, ahna la taliye arrimaha isgaarsiinta, waxay xaaskiisa Thuraya is qabeen muddo 20 sano ah, waxayna isu dhaleen laba wiil.
Qaar ka mid ah lamanayaasha waxay sharaxeen marka ay “dareemayaan cidlo dhanka niyadda ah”.
Nin 46 sano jir ah oo arrimaha siyaasadda ka faallooda, braha bulshadana ku leh boqollaal qof oo ku xiran, gaar ahaan Facebook, ayaa ka hadlay xiriirka uu xaaskiisa la leeyahay. Wuxuu sheegay in xiriirkooda uu “hoos u dhacay: wuxuu ahaa jaceyl uu dareen xoog leh ku dheehan yahay, haddana wuxuu noqday mid is xushmeyn oo keli ah ku kooban, sida laba qof oo meel iskala shaqeysa”.
“Waxay arrintaas billaabatay markii uu dhashay wiilkeena curadka ah. Waxay u muuqatay in is rabitaanka iyo dareenkii isku keen xirayay uu meesha ka baxay. Arrintaasna weli way taagan tahay,” ayuu yiri.
“Waxaan isku deyay in aan cudurdaar u sameeyo, markii ay go’aansatay in meel gaar ah ay seexato, xitaa bilo ka dib markii uu wiilka dhashay. Waxaan dhahayay waa isbedelka hoormoonada ama dareen niyadeed oo ka dhashay foosha.
“Waxaan la tashaday dhaqaatiir, gaar ahaan markii aan arkay in xaaladda ay sii xumaneyso. Markii uu dhashay wiilkeenii labaad, waxay noqotay qof aan rabin in wax dareen ah ama rabitaan galmo ah uu na dhex maro.”
Kamal wuxuu xusuustay xitaa mar ay weydiisatay “in uu joojiyo u dhaqanka sida qof qaangaar ah” markii uu damcay in uu kala hadlo jaceylka ama romantigga uu u baahan yahay. “Markii aan isku deyay inaan u dhowaado, waxay igu tiri waxaad u baahan tahay in aad u dhaqanto sida aabo oo kale hadda,” ayuu hadalka ku daray.
“Thuraya waxay la tahay in ay tahay xaas wanaagsan maadaama ay si wanaagsan u daryeesho carruurteeda, guriga iyo xitaa muuqaalka qoyskeeda. Waxay haysaa shaqo aad u wanaagsan hooyo ahaan iyo shaqada gurigaba – Laakiin intaas ayey ku koobtay.”
Jaceylka dhammaad ma leeyahay?
Jahwareerka Kamal ayaa si degdeg ah u sii xoogeystay. Wuxuu dareemay in aan loo baahnayn, wuxuuna billaabay dib u gurasho. Wuxuu iska galay qolkiisa, wuxuuna halkaas kula mashquulay boqollaalka qof ee facebook-giisa ku texan.
Waxaa dadkaas ka mid ahaa dumar la dhacsanaa fikradihiisa iyo hadalkiisa. Mararka qaar wuxuu Facebook dhigi jiray isagoo qalabka muusikada garaanaya. Markii dad badan ay ku soo biireen boggiisa, “wuxuu ka helay kalsoonidiisa in dib ay u soo noqoto”.
Markii aragtida iyo like-ta ay bateen, wuxuu isla markiiba dib u helay “jaceyl iyo xiriirkiisa galmo in uu sare u kacay”, sida uu sheegay Kamal.
“Waxaa igu adkaatay in aan iska daayo shukaansiga gabdhaha yaryar ee quruxda badan. Waxayna ahayd xilli aad aad u niyad jabsanaa guurkeenana uu sii dhimanayay.”
Lamaanaha aan isku faraxsanayn waxay ku mashquulaan baraha bulshada
Kamal wuxuu hubaa in xaaladdan aysan keligii ku koobnayn: “Dadka sidey doonaan ayey ii arki karaan, laakiin keligey ima haysato arrintan. Waxaa jiro dad badan oo ila mid ah – Badankoodana waan garanayaa.”
Wuxuu yeeshay laba nolol oo kala ah “aabo iyo sey wanaagsan”, bannaankana wuxuu ku yeeshay “jaceyl kale” oo xilliyada dhammaadka isbuuca uu la kulmo.
Hadii uu cudur daar u yeeli lahaa xaaladda, Kamal waxay u wanaagsaneyn in “si shaac ah uu uga hadlo xaaladda uu xaaskiisa kala kulmayay”, sida uu qabo Xamid al-Hashimi oo ku taqasusay Cilmiga Bulshada.
Tanaasulka waa muhiim
“Waxay ahayd in uu xaaskiisa u sheego sida ay xaaladda noqon karto haddii aan waxba laga qaban,” ayuu yiri al-Hashimi. “Aalaaba, arrinta ugu wanaagsan waa in la helo qof dhexdhexad ka ah xaaladda; in lamaanaha ay isu tanaasulaan, in ay iska caawiyaan xallinta khilaafka iyo khaladaadka iyo in aan la sii xoojin arrimaha sababaya in la kala fogado.”
Al-Hashimi wuxuu ku adkeystay in labada qofba uu khalad ka dhacayo. “Xaaska waa in aysan dayicin rabitaanka iyo dareenka seygeeda – waa arrin dabiici ah oo labada qofba ay rabaan, galgaceylkana sii xoojinaya.”
Amal al-Xamiid oo ah dhaqtar ku taqasustay arrimaha qoyska waxay sheegtay in ay muhiim asal ah ay tahay in dadka ay iska joojiyaan hadallada la midka ah; “Waan sameynay wax kastoo xalka uu ku jiray ee la sameyn karay”.
“Wax u jeedo ah kama dhalato, in dhibane la iska dhigo oo qofka kale la eedeeyo,” ayey tiri. Waxay ku talineysaa in arrimaha wanaagsan lagu fakaro, xitaa haddii ay yihiin waxyaabo hore oo laga soo gudbay iyo xilliyadii ay maareeyeen in xaalad adag oo la soo gudboonaatay ay xal u heleen.
“Qof kasta waa in uu muhiimadda saaro sii wadidda xiriirka. Wanaagga waa in uu faafo”, ayey hadalka ku sii dartay.
Amal al-Xamid waa daqtarka cilmu-nafsiga oo ka shaqeysa arrimaha qoyska iyo guurka. Xiriirka wanaagsan wuxuu ka bilowdaa ereyada fiican sida “waad mahadsan tahay” iyo dhoollacadeyn ayey tiri
Mitra iyo Rustam waa lamaane ku dhex-jira da’da afartamaadka. Waxaa la nool labadooda gabdhood, waxayna Birmingham deggan yihiin tan iyo 2005.
Toban sano ka hor, Mitra waxaa ku dhacay kansarka naasaha iyo midka ilmo galeenka. Waxaa laga jaray mid ka mid ah naasaha, waxaana laga saaray ilmo galeenka iyo ugxaan-sidaha. Waxay arrintaas aad u saameysay awoodeeda waxaana ku batay xanaaqa.
Wuxuu qallinkaas meesha ka saaray dhammaan dareenkeeda rabitaan, sida ay sheegtay. “Daaqadda keli ah ee nolosha iiga furan waxay dhex martaa gabdheheyga oo keli ah”.
Way aamnini wayday markii seygeeda uu xaas kale raadsaday. Markii ay ogaatay waxa uu sameynayay, waxay ku qasabtay in iyada iyo haweeneyda kale uu kala doorto. Iyada ayuu doortay isagoo ka baqaya “in gabdhihiisa uu waayo haddii xaas kale uu doonto”.
Lamaanaha way ku adag tahay in ay la talin dhanka guurka ah raadsadaan
“Haddii isaga ay ku dhici lahayd, waan la joogi lahaa nolosheyda inta ka dhiman. Guurka micnihiisu wuxuu yahay in la isla noolaado xilliga wanaagsan iyo waqtiga xunba”, ayey tiri.
Weli waxay Mitra qirsantahay in aysan buuxin karin baahida seygeeda, waxayna sheegeysaa in ay dareemeyso in dembi ay galeyso. “Laakiin ma aqbalaayi in uu iga fogaado. Dumar ahaan ma doonayo in aan dareemo sida qof la cidleeyay oo aan la rabin.”
dadka waa suuragal in aysan ku qancin doorkooda guurka
Samar, waa 29 sano jir, waxay ka tagtay Suuriya 2015-kii. Hadda waxay ku nooshahay Turkiga halkaas oo nin Turki ah ay ku guursaday si ay “uga badbaado nolosha qaxootinimada oo markasta dhibaato lagala kulmo”.
Waxay fileysay in guurka “uu yahay xalka keli ah” balse la yaab ayey ku noqotay markii ay aragtay dhaqanka seygeeda iyo qoyskiisa in ay ka duwan yihiin habka nolosheeda ay tahay.
“Nolosheyda oo dhan waa xanaaneynta carruurta, cunto karinta iyo nadaafadda, iyo in dalalbkiisa aan u hoggaansamo,” ayey ku tiri BBC.
Sababta keli ah ee ay u guursatay nin aan ku dhaqan ahayn waxay ahayd taageero dhaqaale oo keli ah si ay ugu fududaato in ay si wanaagsan u koriso labadeeda carruur.
Xiriir ka kooban dad ka badan laba qof
“Haddii wax kale oo micno leh aan haysto, hal maalin lama sii joogi lahayn. Weligeey sidan la iilama dhaqmin. Fikradeyda, sharafteyda, dareenkeyga dhammaan waan cabirikaray, waana la soo dhoweyn jiray. Waxa keli ah ee uu rabo waa galmo.”
Rouj, oo ka soo jeeda Erbil, waxay sheegtay in aabeheed oo 60 sano jir ah, uusan hooyadeed oo 47 sano jir ah la seexan muddo tobannaan sano ah.
Hooyadeed way ogtahay in aabeheed uu “si qarsoodi ah u qabo xaas kale”, balse waxay doorbiday in xaaladda oo dhan qarsoodi ahaato. Ma dooneyso in ay gundhig uga dhigto xanta, illaa xaaladda ay ka soo shaacbexeyso.
“Aabehey waa nin taajir ah, waana sababtaa oo keli ah ee keentay in inka badan 30 dumar ah ay u ogolaadeen guurkiisa. Hooyadey waa qof adag oo dhaqaale ahaan ka madaxbannaan aabe, laakiin ma dooneyso in ay hadasho ama ay furriin weydiisato, si aysan sumcaddeena wax ugu dhimin. Waxay dooneysaa in sharafteeda ay dhowrato,” ayey tiri Rouj.
Hooyadeey ma dooneyso in tallaabo sharci ah ay qaado sababtoo ah ujeedadeedu waa in dumarkaas kale lagu qabo sidaas sirta ah, weligood.
Xalka suuragalka ah
al-Hamid oo ah dhaqtar ku taqasusay cilmu-nafsiga waxaa u muuqato in lamaanaha ay doonayaan xallinta arrimaha u dhexeeya. “Haddii midkoodna uu yaso midka kale, ama uu ku xadgudbo, xaaladda way sii xumaaneysaa oo keli ah. Waa in si furan ay isula hadlaan aysanna isku dhihin ereyo xun. Haddii aan sidaa la sameyn, xaaladda way ka sii dareysaa.”
Dr Hamid al-Hashemi, waa baare arrimaha bulshada, wuxuuna aaminsan yahay in masuuliyadda xiriirka ay saarantahay laba qof ee is qaba, ayna masuul ka yihiin fashilka ka yimaada halkaas.
Sida uu al-Hamid qabo, mararka qaar, iyadoo hal qof uu isku deyayo xalka, in midka kale uu ka shaqeeyo sii adkeynta xaaladda iyo jahwareer, markasta oo la isku deyo isbedel.
Si dhibatada loo xalliyo, lamaanaha waa in ay bartaan sidii wax kasta loo xallin lahaa marka ay taagan yihiin. Waa in ay si joogto ah isu xaal wareystaan iyadoo luqad wanaagsan la iskula hadlayo, sida uu sheegayo al-Hamid.
“Haddii seyga uusan xaaskiisa kaga yaabsan hadiyadaha, waa in iyada ay sameyso sidaas. Waa in qofna uusan quusan, laakiin waa in wax cusub lala yimaado,”
“Arrinta ugu muhiimsan waa in aan la niyad jabin lana quusan, waa in isku deyga la sii wado.”
*Magacyada warbixintan ku jira waala badalay si aan loo aqoonsan qaar ka mid ah dadka la wareystay.
Previous articleMaxaa Sababa Madax Xanuunka Haweenka Qaar Ku Dhaca Xilliga Caadada Kadib?
Next article4 Waxyaabood Oo Caruurta U Baahanyihiin Inay Ka Maqlaan Waalidiintooda
Hani Osman, waa Wariye wax ka qorta Arrimaha bulshada, qoyska, jacaylka, nolosha. Email: Haniosman@aayaha.net
Waa kuwaan 5 Eray oo qiimo leh oo nin kasta uu...
STUDY REVEALS WHY SLEEP IS VERY IMPORTANT TO A WOMAN’S SEX...